Mashandisiro Aungaita Bhurandi Yako neVine Kushambadzira | Martech Zone
Mugovera, July 4, 2015 Douglas Karr
Isu takagovana infographic pane iyo kumuka kweMuzambiringa uye akawana chinoshamisa kesi yekudzidza paVine Kushambadzira kubva kuna Brian Gavin Diamonds, asi zvakadii nezveako Muzambiringa Kutengesa Sarudzo?
Vine, chikuva chinoratidzira 6-yechipiri mavhidhiyo anotamba pane chiuno, yaunganidza kutarisisa kwevanopfuura mamirioni makumi mana evashandisi. Vanopfuura mamirioni zana vanhu vanoona Miti yemizambiringa mwedzi wega. Izvo zvinoita iyo chikuva ivhu rakaorera rehungwaru kushambadzira nzira yekuwedzera yako brand kuratidza. Nekuti chikuva chiri chitsva, uye chimiro chakasarudzika, SurePayroll akafunga kuti zvinogona kubatsira kuongorora chaizvo mashandisiro aungaita uyu Vine kubatsira bhizinesi rako.
Sekureva kwaS SurePayroll, yako Vine yekushambadzira zano inofanirwa kuve nekuronga kutanga - kufunga nezvevateereri vako, zvinoonekwa uye nemhere, uye kugadzira matanhatu mapaneru enhau. Ita shuwa kuti Vini vhidhiyo ichapa chinangwa, mimwe mienzaniso ndeiyi:
Gadzira Vini vhidhiyo inobatsira vanhu kugadzirisa dambudziko.
Gadzira Vini vhidhiyo inoratidza chinyowani chinyorwa kana ebook.
Gadzira Vini vhidhiyo inoratidza "Sei To".
Gadzira Vini vhidhiyo inopemberera chiitiko kana zororo.
Gadzira Vine vhidhiyo iyo inogovera inovhuna nhau.
Gadzira Vini vhidhiyo iyo inoratidza ako akanakisa mafeni.
Gadzira Vini vhidhiyo iyo inogoverana nemutengo, coupon kana freebie.
Gadzira Vini vhidhiyo inotenda vatengi vako.
Gadzira Vine vhidhiyo akateedzana kuchengetedza vataridzi vachidzoka.
Gadzira Vini vhidhiyo ine sneak peak mukambani yako tsika.
Uye gara uchiisa logo yako, smart caption, chinongedzo kune webhusaiti yako, a yakanyatso tsvakurudzwa hashtag, uye Kudana-Ku-Kuita!
Tags: Surepayrollmuzambiringamizambiringa hashtagsmazambiringa mazanomuzambiringa zvishwekutengeswa kwemuzambiringanzira dzemuzambiringazano remuzambiringamazambiringa mavhidhiyo
Anofara 4th yaChikunguru! Iyo Inogona Kubhadhara kuve Patriotic paSocial Media